Ingabe Indawo Yeseva Ithonya Ibhizinisi Lakho? Uchwepheshe kusuka ku-Semalt
Ukumaketha kwe-intanethi kuyinkimbinkimbi evumela ukuthi ufinyelele izigidi ezingenzekaamaklayenti ngaphakathi kwesikhashana esincane. Amabhizinisi nosomabhizinisi bakhetha imakethe ye-intanethi ngenxa yekhono layo elingenamkhawulo ekufinyeleleni okushaamaklayenti emhlabeni wonke. Amafemu amaningi aphumelele ngemikhankaso yabo yokuthengisa yokudijithali, ngenxa yamakhono abo aphezulu kakhulu wokukhomba.
Le mpumelelo yenza abantu abaningi bahileleke ku-SEO ehlosiwe. Ngenxa yalokho, indawoabanikazi bafuna ukuba indawo yabo yokubamba iqhaza ibe ngamazwe athile, kwezinye izinhlelo ezithile zokuphatha okuqukethwe. Ezimweni eziningi, abantu bangaseuyazibuza ukuthi ungaphumelela kanjani ku-geo-targeting ngaphandle kokusetshenziswa kwendawo yendawo yeseva.
uMax Max, uchwepheshe we i-Semalt Amasevisi weDivaysi ahlanganyela izimfihlo ze-geo-targeting yamabhizinisi.
Ekuqaleni, kunezinto ezibalulekile okufanele uzicabangele. Ngokwesibonelo:
Indlela yokubhekana nezindawo eziningi zokuxhumana nge-server eyodwa
Indlela yokwenza abakwa-web crawlers bahlukanise ulimi lwesibili kusuka kokuqukethwe okuphindwe kabili
Yeka ukuthi indawo yeseva ingathinta kanjani i-SEO
Iyini ithonya lesimo se-server endaweni yami yamakhasimende
Noma kunjalo, indawo yeseva ayibonakali ukuthi ayinayo impikiswano e-commerceimpumelelo ayisekho. Amathuluzi we-Google Webmaster Amathuluzi ane-CDN, engenza ezinye izihlungi ze-geo-targeting ezithile futhi aqinisekise ukuthi okuqukethwe kufinyelela kwezinyeabathengi abahlosiwe ngaphansi komugqa, okungenzeka kuphela ngokusebenzisa ukusetshenziswa kwezindawo ze-server ekahle.
Yeka ukuthi amawebhusayithi angaqondisa kanjani izwe elilodwa ngolimi olulodwa
Izinjini zokusesha zanamuhla ezifana ne-Google ne-Bing zinamathuluzi we-webmaster, okuyintounikeze inkonzo yokukhomba uhlobo oluthile lomgwaqo..Ku-Google Amathuluzi Omsebenzi Wewebhu, lokhu kulungiselelwa kuyatholakala ku-Search Traffic>Ukuhloswa ngamazwe ngamazwe> Ithebhu yezwe. Izwe ofuna ukulilungiselela ukubhekela kufanele livele kwimenyu yokudonsela phansi. Kwezinye izimo,Abathuthukisi bewebhu bangakhetha uhlelo lokubamba elinesizinda esiphezulu sezinga eliphezulu. Le CCDL ingafaka i-URL yewebhu njengaleyowww.mysite.de isayithi laseJalimane. Izinjini ezifana ne-Google zihlobanisa ngokuzenzakalelayo lesi sizinda ngalelo zwe elithile. Esimweni esinjalo,Iwebhusayithi enjalo ayikwazi ukuzihlanganisa nesinye isayithi.
Noma kunjalo, amanye amawebhusayithi asebenzisa izizinda eziphezulu eziphezulu njenge- (.com, .org, njll).Kulezi zimo, umsebenzisi unendlela yokudala isizinda somsebenzisi noma ama-subdirectories wezwe elihlukile. Uma kungenjalo, injini yokuseshangokuzixhumanisa ngokuzenzakalelayo neminye imingcele efana nalokhu:
Ama-backlink afika kusayithi
Ikheli le-IP leseva
Idatha yendawo kusuka kumabonakude kanye
Ulwazi olufanele kusuka kumathuluzi afana ne-Google Bhizinisi Lami
Kungenzeka ukusetha iwebhusayithi e-Spain futhi iqondise konke okwenziwa ngokwezifiso zayokuya eJalimane usebenzisa i-Google noma i-Bing Webmaster amathuluzi. Uma ubamba amasayithi anjalo, kubalulekile ukucabangela isici sekhasi lokulayisha ikhasi.Imithwalo yewebhusayithi esheshayo uma umsebenzisi esezweni izwe iseva yesayithi ihlala khona.
Ngaphezu kwalokho, iwebhusayithi ingaqondisa wonke umhlaba. Kulokhu, iGoogle incomausebenzisa imenyu engabhalisiwe ekukhethweni kwehla kwezwe. Ukuhluleka ukwenza lokhu, umuntu angase alahlekelwe ezinye izinzuzo, ikakhulukazi ngenxa ye-i-SEO yendawo ezenzakalelayo, okuyinto i-Google ebeka kuyo iwebhusayithi. Ukusebenzisa inethiwekhi yokuletha okuqukethwe (CDN) nayo ibaluleke kakhulu. I-CDN ephumelelayoIsu linikeza ezinye izisetshenziswa ze-server esebenzayo futhi yenza isayithi iphendule kakhulu kakhulu Source .